अहिलेको राजनीतिक घटनाले दलहरु पुुरै असफल भएका छन् प्रदिप विक्रम राना, राष्ट्यि अध्यक्ष, राप्रपा नेपाल - Yugantar Khabar | News Portal
अहिलेको राजनीतिक घटनाले दलहरु पुुरै असफल भएका छन् प्रदिप विक्रम राना, राष्ट्यि अध्यक्ष, राप्रपा नेपाल
Posted on May 7, 2021 by dimdung
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम राम्रो छैन । जनताको विस्वासप्रति विस्वासघात भएको छ । कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै असफल भएका छन् । आफुलाई देशभक्त भन्ने कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर जवरा नेतृत्व पनि असफल भएको छैन । देशभक्ति पनि देखिएन । अहिले संसद अधिवेशन बोलाईएको छ । कांग्रेसले पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । खासमा अहिले बजेट अधिवेशनको लागि संसद आह्वान गर्नुपर्ने हो तर प्रधानमन्त्रीले विस्वासको मत लिने भनिएको छ । देशमा कोरोना रहेको छ । निती तथा कार्यक्रम र वजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले मलाई लाग्छ अहिले जे जे भने पनि निती कार्यक्रम र
वजेटलाई प्रचण्डले समेत समर्थन गर्ने छन् । किनकि बाध्यता नै त्यहि आउन सक्छ ।
राप्रपा नेपालको मुल निती के हो ?
राष्ट्यिता, प्रजातन्त्र र उदारवाद हाम्रो मुल नीति हो । हुन त अर्को राप्रपाको निती पनि त्यहि छ । उहाँहरु त्यो निती अडिन सक्नु भएन । अब यसलाई हामी पूर्ण पालना गर्छौ । हाम्रो पार्टी एजेण्डा राजसंस्था, हिन्दु अधिराज्य र अखण्ड नेपाल हो । अहिले देशमा लोकतन्त्रको नाममा जुन लुटतन्त्र चलिरहेको छ यसका विरुद्ध हामी बोलिरहेको छौं । कोभिड पछि हामी सशक्त आन्दोलनमा जाने छौं । अहिले हामी आफु पनि बचौं र बचाऔं भन्ने अभियानमा छौं । बाचे न केही गर्ने हो । त्यसैले सबै सजग रहौं र आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दै जानु पर्दछ ।
जनताले फालेको राजा फेरी सल्बलाउन थाले नि ? तपाई पनि निरन्तर राजा चाहिन्छ भन्दै आउनु भएको छ ?
नेपालमा राजा जनताले फालेको होइनन् । अब जनताले नै ल्याउँछन् राजा । तत्कालिन माओवादी सडकबाटै आएको हो । अब राजा पनि सडकबाट नै ल्याउनु पर्छ । नेपालमा राजा फाल्दै संघीय गणतन्त्र आयो तर यसले राजनीतिक सथायीत्त्व दिएन । । त्यसैले नेपालमा राजसंस्था जनताले सडकमबाट नै ल्याउँछ, ल्याउनुपर्छ । अहिले चीन र भारतले पनि महसुस गरिसकेका छन् । अहिले भारतमा राजामाथि गरिएको स्वागतले स्पष्ट भईसकेको छ । राजालाई मेलामा जुन स्वागत गरियो यस आम नेपालीका लागि तरंग र आसा पनि जगाईरहेको छ । किनकि उनीको क्षेत्रिय सुरक्षाका कारणले पनि यस्तो अवस्था देखा परेको हो । नेपालको राजनीतिको ट्याक १२ बुदें सहमतिबाट बिग्रिएको हो । आखिर २००७ सालदेखि पछिल्लो जनआन्दोलनसम्म भारतले गराईदिएको थियो भन्ने सुनिन्छ । यहाँ नक्कली राजावादी धेरै छन् । सक्कली त हामी हौं, त्यसैले हामी चुरीफुरी गर्दैनौ । हामी समय कुरेर बसिरहेका छौं । अहिले तीन वटा दल मिलेर राप्रपा बनेको छ उनीहरुलाई जनताले विस्वास गर्न छाडेका छन् । त्यसैले राजालाई सडकबाट ल्याई वर्तमान संविधानको गणतन्त्र रहेको धारालाई संशोघन गरि राजासंस्थाको स्पेश राख्नुपर्दछ । अबको राजनीति त्यहि ढंगले गए मात्र देशको राजनीतिले शान्ति र स्थिरता हासिल गर्नेछ ।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन विदेशीले ल्याइदिएको भन्न खोज्नु भएको हो ?
त्यो त प्रष्टै छ नि । २०६३, ६३ को जनआन्दोलनपछि पनि विदेशी भुमिका रोकिएन । स्थायी सत्ता र राजा सहितको प्रजातन्त्रमाथि प्रहार भयो । जसले नेपाली जनता र देशको अवस्था कमजोर बनाई रहेको छ । त्यसैले राजसंस्था, सनातन हिन्दु अधिराज्य र अखण्ड नेपाल अनिवार्य भईसकेको हाम्रो जोडदार माग पनि त्यही हो । जुन आडमा फोहोरी राजनीति सुरु भयो । अहिले प्रजातन्त्रको नाममा जुन फाँसीवाद चलिरहेको छ त्यसको विरुद्धमा सबै लाग्नूपर्दछ । त्यसैले अब राजसंस्था पुनस्थापना भएन देश नै विघटन हुन्छ र देश सिरिया वा अफगानिस्तानको बाटोमा जान्छ । देशमा आज जुन काले काले मिले खाउँ भाले भने जस्तै भईरहेको छ यसको हामी सबैले प्रतिकार गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दलहरु सत्तामा त आए । तर यिनीले केही गरेनन् । आज सबैतिरबाट आन्दोलन र विरोध मात्र भईरहेको छ तर यो सराकार कसैको कुरा सुन्दैन । राष्ट्रियताको जुन आवाज उठिरको छ, त्यसमा समेत राजनीतिक दलहरु नक्कली देखा परेका छन् ।
त्यसो भए अहिले दलहरुले बोलेको कुरा पूरा गरेनन् ?
अवश्य पनि हो, यसमा मैले भनिरहनु नै पदैन, हामी सबैले देखे सुनेकै छौं । पार्टीहरुले बोलेको शब्दावली खोई ? देश अविकसित छ, जनता दिनानु दिन कमजोर र गरिव भईरहेका छन् । १७ हजार मान्छे मारेर ल्याएको यो व्यवस्थाको उपलब्धी खोई ? नेपालको जलस्रोत, सुरक्षा र परराष्ट्रमा भारतले आँखा गाडेको भनिएको छ । यसमा हामी नै चनाखो बनेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हो तर त्यसरी राजनीतिक अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल सनातनदेखि पुरानो भूमि हो । हिजो राजा घेराबन्दीमा थिए आज ओली पनि घेराबन्दीमा परेका छन् । यहाँ जुन बोल्ने स्वतन्त्रता भनिएको छ, त्यो छैन सिमित व्यक्तिहरुले मात्र पाएका छन् । देशमा हाल संविधानसभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुंदैं नयाँ संविधान समेत आएको बताईएको छ । तर व्यवस्था परिवर्तन बाहेक नेपाली जनताको दिनचर्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । बरु देश नै नरहने अवस्था पु¥याएका छन् । देशमा वाम तथा कम्युनिष्ट सरकार रहेको छ, तर देश र जनताका लागि केही गरेन । दुई दुई पटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचन भई नयाँ संविधान आयो । लगतै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानिय तह सहितको तीन तहको निर्वाचन भई अहिले दुई तिहाईको वाम सरकार चलिरहेको छ । अहिले संसद समेत विघटन भई ब्युतिएको अवस्था छ, तर संसदले काम गर्न सकिरहेको छैन । दलहरुमा असहमति भईरहेको छ । दुई तिहाईको सरकारले केही गर्न नसक्नु, पार्टी भित्रकै झगडाले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनताप्रति जिम्वेवारी बहन गर्न नसक्नु विडम्वना बनेको छ । अहिले संसद ब्यँतिएपछिको राजनीतिक अवस्था पनि देखेका छौं । प्रदेशहरुमा देखिएको फोहोरी राजनीतिक खेल पनि दखेकै छौं । जनतामा निरासा तुल्याएको छ । जनता रोग र भोकमा भएको बेला जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा त्यसो भईरहेको छैन । त्यसैले अब यो व्यवस्था अब चल्ने अवस्था छैन ।
राम्रो कुरा पनि होला नि यो व्यवस्था भित्र ?
नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएता पनि कमजोर देखियो । वैदेशिक निती पुरै असफल भएको छ । भ्रष्टाचार, कालाबजारी, दलाली, अन्याय, अत्यचार, बलात्कार, मुल्यवृद्धि, करवृद्धि, बेराजगारी, विभेद र वेतिथि बाहेक जनताले केही पाएनन् । र देश पुरै परनिर्भर भएको छ । देशको उत्पादनमा ध्यान दिन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । अहिले आफुलाई ठुलो दल बताउनेहरुले आफ्ना सिद्धान्त, उद्देश्य र विचार छाडिसके । आज दलको नेताहरु व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथी उठ्न सकेका छैनन् । प्रजातन्त्रको अनुभुती दिन सकेनन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले देशभक्ति र स्वाभिमानलाई भुलेर आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको संघीयताको संरचना बनाए । हिमाल, पहाड, तराई मधेश कोही छैन पराई भन्ने भाव राखी सबै पक्षलाई समेट्दै गास, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, शान्ति सुरक्षा, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको समतामुलक समाज स्थापनाको लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने छौं । कथित नयाँ संविधानले भने जस्तो समाजवाद मुखले भनेर मात्र हुदैन, हामी व्यवहारले गरेर देखाउन चाहन्छौ ।
राजनीतिक दलहरुमा देशभक्ति पनि देखिएन ?
पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकिकरण गर्दै विश्व सामु स्थापित गर्दै जननी नेपाल भूमीको पहिचानलाई फराकिलो पारे । उहाँले बाईसे चौविसे राज्यहरुलााई एकिकरण गर्दै एकिकृत तथा अखण्ड नेपाल बनाए । नेपाल र नेपालीलाई एकताको शुत्रमा बाध्ने काम गरे । त्यहि बीचमा १०४ वर्ष राणा शासन चल्यो । राजालाई खापीमा राखि राणाहरुले शासन गरे । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो तर देशमा राजनीतिक अस्थिरता भयो । त्यसरी राजा महेन्द्रले पञ्चायतको घोषणा गरे । ३० वर्षे पञ्चायतकालमा देशले काँचुली फेर्यो । शुसासनको अलावा धेरै कलकारखानाहरु बनाए । बहुदल आयो तब देशको अढोगति सुरु भयो । पछिल्लो राजानीतिक परिवर्तनले राजा फ्याकि गणतन्त्र र गणतन्त्र आयो भनिएको छ तर देश र जनताले केहि पाएनन् ।
फेरि राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्य आउला ?
नेपालमा सनातनदेखि नै हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्था परम्परादेखि रहेको सबैलाई जग जाहेर नै छ । नेपालको राजसंस्था विश्वमा स्थापित हुनुको साथै गौरवान्तित थियो । त्यस्तो मुलुकलाई राष्टिय एकताबाट विमुख गरियो संघीय गणतन्त्र लादियो । विदेशी इशारामा हिन्दु अधिराज्य र राजा हटाईयो । यसबीचमा देशमा आतंक, भ्रष्टाचार, लुटपाट, विसंगति विकुति मात्र भए । बहुदल पछि निजीकरणको नाउँमा सबै उद्योग धन्दा बचे । विश्वको एक मात्र हिन्दु पहिचान समाप्त पारे । कथित गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्दै सिमित नेताहरुले अकुत सम्पक्ति आर्जन गरे । देश र जनतामा कुनै परिवर्तन आएन । नेपाली जनता यति बेला निकै निरास र आक्रोस छन् । भुलभुलैयामा संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई समर्थन गरेकोमा घोर पश्चाताप गरिहेका छन् । गणतन्त्रवादी लेण्डुप दार्जी प्रवृत्तिका लुटेराहरु बाहेक आम जनता र सम्पूर्ण न्यायप्रमी जनता राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्यको पक्षमा रहेका छन् । जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेका राजामाथि नै धोका भयो । विदेशी इशारामा यस किसिमको क्रियाकलाप भएको थियो । त्यसैले विदेशी भूमिमा १२ बुंदे सहमतिको आडमा जुन दोस्रो जनआन्दोलन भएको भनिएको छ, त्यहिबाट नेपालको राजनीति दुषित भएको हो ।
तपाईहरुको आन्दोलन झन कमजोर हुंदै गईरहेको छ नि ?
अहिले यो कोरोनाको बीचमा कसैको आन्दोलन छैन । गर्ने अवस्था पनि छैन । विचार एजेण्डा र नेतृत्व विहिन आन्दोलनले कहिँ कतै पुगिदैन । राजा र जनता विना देश जोगिदैन । हो अहिले शासन सत्ता नै परिवर्तन आवश्यक छ । जसलाई विस्वास उनीहरुबाट धोका मात्र भएको छ । यिनीहरु विदेशीको इसारा विना सरकार चल्नै सक्दैन । हामी आन्दोलन र परिवर्तनको विरोधी होईनौ । राष्ट्रलाई विघटनको बाटोमा लैजाने संविधान र अहिलेको व्यबस्थाको विभेदकारी रहेकाले यसलाई फ्याकी नयाँ व्यवस्था ल्याउनु पर्दछ । किनकि यो संविधानले राष्ट्वादीहरुको ठुलो शक्तिलाइ्र्र निषेध गरेको छ । अहिले देशमा कम्युनिष्ट सरकार जुन भनिएको छ पहिलो त नेपालमा कम्युनिष्ट नै छैनन् । नयाँ अधिनायक नव सामन्तवादी हुन् ।
तपाईहरुले पनि अहिलेको अवस्थामा केही गर्न सक्नुभएन नि ?राप्रपाले पनि राजसंस्था, हिन्दु अधिराज्य र अखण्ड नेपालको एजेण्डामा अडिग रहन सकेन । पाएको जनमतलाई जोगाउन सकेन । नेताहरुबीच व्यक्तिकेन्द्रीत लडाईले पार्टी कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसैले आज दुख पाईरहेको छ भने एजेण्डा विहिन भएको छ । त्यसरी हामी नयाँ ढंगले अघि बढ्न बाध्य भयौं । अहिलेको अवस्थामा कम्यूनिष्ट तथा नेपाली कांग्रेसको कुनै आफ्नो विचार छैन, उ अरुको एजेण्डामा समय वर्वाद गरिरहेको छ । यो अवस्थामा राप्रपा नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्नू पर्दछ । अब हामी देश र जनतालाई प्रजातन्त्रको अनुभुती दिलाएर व्यवहारिक रुपमै आधुनिक समाजवाद जसमा अहिलेको व्यबस्थालाई भङ्ग गरेर नेपाल र नेपाली भएर बाँच्ने, देशलाई समृिद्धको बाटोमा लगेर जनतालाई भ्रष्टाचार निर्मुल पारी शुसासन र देशको समृद्धि हासिल गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनेछौं ।
संसद विघटन भयो र सर्वोच्च अदालतले ब्यँताईदियो यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेको संसद विघटनले थोरै भए पनि देश जोगाउने काम गरेको थियो, ब्युतियो झगडा देखेकै छौं । तर हामी यो संविधान र यो व्यवस्थाकै खिलापमा रहेको छौं । भौतिक विकासमा पछि परेपनि प्राचिनकालदेखि नै नेपाल विश्वको राज्यनिर्माण पक्षमा बलियो थियो र छ । देशमा उत्पादन छैन, अर्काको देशको भरमा देश चलेको छ, बाँच्नु परेको छ, नेपाली युवायुवतीहरु श्रम बेच्न विदेशको तातो घाममा जानुपरेको छ । आफ्नो देशमा जन्मेर पनि शासक वर्गको कमजोर नितीले गर्दा देश विकास भएन । भएका कलकारखाना बरु बेचेर खाए, खाली कमिशनमा रमाईरहेका छन् ।
भनेपछि यो व्यवस्था काम लाग्दैन ?
देशमा कुनै किसिमको आर्थिक उत्पादन छैन, भष्ट्राचारमा लिप्त छ, महाकाली बेचे, आज फेरी लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको कुरा आएको छ । राष्ट्रियता, धर्म र देश नै बेचेपछि पहिचान कहाँ रह्यो र ? राष्ट्रिय एकता र विखण्डनबाट रोक्न पनि राजसंस्था चाहिन्छ भनेका छौं । हाम्रो देश एकल र एकात्मक राज्य हो, धर्म, परम्परा र कला सस्कृतिको रक्षा गर्नका लागी र देशलाई विघटनबाट रोक्नका लागी पनि हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्था चाहिन्छ । त्यसैले हामीले देश बचाउन र नागरिकको संरक्षर, स्वामित्वको अधिकार र अस्तित्वको संरक्षरको लागि राजसंस्था भनेका हौं । कुनैपनि कुराको समय आउंछ, त्यसैले सम्पूर्ण तहतप्कामा रहनुभएको आम जनता एकजुट हुन आह्वान गर्दछौं ।
यस्तो अवस्थामा तपाई तथा पूर्व राजाको भूमिका खोई ?
हामीले सधैं राजनीतिक र सामाजिक विकृति विरुद्ध बोलिरहेका छौं । राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्यको लागि निरन्तर आवाज उठाईरहेका छौं । राजाले हामीले झैं बोल्दै हिड्ने कुरा आउँदैन । हामी जनताको लेभलबाट बोल्ने हो । राजाले कुटनीतिक तवरले कदम चाल्ने हो । तपाईलाई अहिलेको महत्वपूणे कुरा बताउँकि अहिलेको ओलीलाई टिकाउने काम भारत तथा राजाबाटै हो । हामी ओली सरकारको विरोध मात्र गर्दैनौं । लिम्पियाधुरा कालापालीको जग्गा नेपालको नक्सा राख्ने काम जुन गर्यो त्यो महत्वपूर्ण रहेको छ । राष्ट्यिताको सवालमा पनि केही गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ ।
असारको दोस्रो सातादेखि लककाउनको मोडालिटी फेरिदै
खाडी मुलुकका लागि हवाई उडान खुला गरिदै
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका आठ जना सम्पर्कविहिन
४० अर्बको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट
माधव नेपाल पक्षीय युवा संघले भन्यो – केपी ओलीले कि अध्यक्ष कि प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्छ
लकडाउन अवधिमा कर नअसुल्नू: सर्वोच्च अदालत
अदालतले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन – प्रधानमन्त्री
कांग्रेसले गर्‍यो १४ औं महाधिवेशन सार्ने निर्णय
गण्डकीमा सेलिब्रेटी दिपङ मनाङे
राना समुदायबाट पहिलोपटक नारदमुनी राना संघीय मन्त्री बन्दै
एमाले एकताको सकस – एकिकरण कि ध्रुवीकरण
नेपाली काँग्रेस जनताको जनमतविना सरकारमा जानु हुदैन उपसभापति : शिव सुनार
जनताको मत विना नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाँदैन पूर्वउपसभापति : नविन राई।
राष्ट्रपति बाटै कु भएकाले यो संविधानले अब काम गर्दैन : शरदचन्द्र दाहाल
अहिलेको सत्ता संघर्ष दलाल पुजीवादी व्यवस्थाको गम्भीर रुप हो : लक्ष्मण बर्देवा
राजनीति, समाजसेवा र व्यवसायलाई संगसंगै अगाडि बढाउछु : तिलक लोहनी
चुम्बनले बढाउन सक्छ संक्रमण
पत्याउनै गाह्रो -कोरोना भ्याक्सिनले शरीर ‘चुम्बक’ बनाएको दाबी
सर्जिकल माक्स वितरण गर्दै चौधरी
कोरोना निशुल्क उपचार र खाद्यन्नको उचित ब्यवस्था गर: गोबिन्द निरौला
राति ९ बजेपछि रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह
छालामा देखिने स साना परिवर्तनले तपाईको ज्यान लिन सक्छ हुनुस् सचेत
चिन द्धारा आएको खोप ४० देखि ५९ वर्ष उमेरका समूहका व्यक्तिलाई
बाक्लो तुवाँलोले खतरात्मक अवस्था सृजना गरेको छ बिना काम घर बाहिर नजानुहोस् ।